Convertor ny vola, Exchange Rates
Currency Converter - fiovam-po an-tserasera misy izao tontolo izao ny vola ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny. Ny tetik'asa manokana miaraka amin'ny tahan'ny fifanakalozana sy ny sarany amin'ny vola maneran-tany rehetra. 173 vola amin'ny angon-drakitra an-tserasera.
ora Day Week Month 3 volana taona 3 taona 10 taona
USD - US dolara EUR - Euro GBP - kilao Sterling JPY - Yen CNY - Yuan RUB - Rosiana roubles AUD - Aussie dolara AZN - Azerbaijani manat ALL - Albaney Lek DZD - Alzeriana Dinar XCD - Atsinanana Karaiba dolara AOA - Kwanza MOP - Macanese pataca ARS - Arzantina Peso AMD - Armeniana dram AWG - Avy tao Aruba Florin AFN - Afghan Afghani BSD - Bahamian dolara BDT - Bangladesy taka BBD - Barbados dolara BHD - Bahrain Dinar BYR - Belarosiana roubles BYN - Belarosiana roubles BZD - Belize dolara XOF - CFC Franc BMD - Bermudes dolara BGN - Biolgara Lev BOB - Boliviana Boliviano BAM - Bosnia sy Herzegovina convertible marika BWP - Botsoana Pula BRL - Breziliana tena BND - Broney dolara SGD - Singapore dolara BIF - Burundi Franc BTN - Bhutan ngultrum INR - Indian Rupee VUV - Vanuatu vatu HUF - Hongariana forint VEF - Venezoeliana Bolivar Fuerte VND - Vietnamesse Dong XAF - CFC Franc HTG - Haitiana gourde GYD - Goiana dolara GMD - Gambiana dalasi GHS - Ghana cedi GTQ - Goatemala quetzal, GNF - Ginea Franc GIP - Gibraltar kilao HKD - Hong Kong dolara HNL - Honduras lempira GEL - Zeorziana Lari DKK - Danoà satro-boninahitra DJF - Djibouti Franc DOP - Dominikana Peso EGP - Ejiptiana kilao ZMW - Zambian Kwacha MAD - Maraokana dirham ZWD - Zimbaboe dolara ILS - Israeliana sekely vaovao IDR - Indonezianina Rupiah JOD - Jordana Dinar IQD - Irakiana Dinar IRR - Iraniana Rial ISK - Islandy krone YER - Yemenita Rial CVE - Cape Verde escudo KZT - Kazakhstani tenge KYD - Cayman Islands dolara KHR - Kambojiana riel CAD - Canadian dolara QAR - Qatari riyal KES - Kenya shilling COP - Kolombiana Peso KMF - Comoran Franc CDF - Kongoley Franc KPW - Won Koreana Avaratra KRW - Won Koreana Tatsimo RSD - Serba Dinar CRC - Costa Rica Colon CUP - Kiobàna Peso KWD - Koetiana Dinar NZD - New Zealand dolara KGS - Kyrgyzstani, som LAK - Lao Kip LVL - Zavatra Lat LSL - Loti ZAR - Rand LRD - Liberia dolara LBP - Libaney kilao LYD - Libyana Dinar LTL - Litoanianina litas CHF - Soisa Franc MUR - Maorisy Rupee MRO - Maoritaniana ouguiya MGA - Malagasy ariary MKD - Masedoniana denar MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin ringgit MVR - Maldivian rufiyaa MXN - Meksikana Peso MZN - Mozambikana metical MDL - Moldavia Leu MNT - Mongoliana tugrik MMK - Burmese kyat NAD - Namibiana dolara NPR - Nepaley Rupee NGN - Nizeriana Naira ANG - Antilliaanse gulden NIO - Nikaragoa Cordoba XPF - French Pacific Franc NOK - Norvejiana krone AED - UAE Dirham OMR - Omani Rial SHP - Saint Helena kilao PKR - Pakistan Rupee PAB - Panameana Balboa PGK - Kina PYG - guarani PEN - Peroviana Nuevo Sol PLN - Poloney zloty RWF - Rwanda Franc RON - Malagasy Romanian Leu XDR - SDR (Special mpitan-zo) SVC - Salvadoriana Colon WST - Tala STD - Sao Tome sy Principe dobra SAR - Saodiana riyal SZL - lilangeni TRY - New Tiorka Lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Syriana kilao SKK - Slovaky koruna SBD - Nosy Solomon dolara SOS - Somali shilling SDG - Sudanese kilao SRD - Suriname dolara SLL - Leone TJS - Tajik somoni THB - Thai baht TWD - Taiwan new dolara TZS - Tanzaniana shilling TOP - pa`anga TTD - Trinidad sy Tobago dolara TND - Toniziana Dinar TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan new manat UGX - Oganda shilling UZS - Uzbekistan vola UAH - hryvnia UYU - Orogoaiana Peso FJD - Fidji dolara PHP - Filipina Peso FKP - Nosy Falkland kilao HRK - Malagasy Croatian Kuna CZK - Czech koruna CLP - Shiliana Peso SEK - Zavatra krona LKR - Sri Lanka Rupee ERN - nakfa ETB - Etiopiana Birr JMD - Jamaikana dolara SSP - Atsimo Sodane kilao BTC - Bitcoin CLF - Shiliana Unidad de Fomento EEK - Estoniana kroon GGP - Guernsey kilao IMP - Manx kilao JEP - Jersey kilao MTL - Maltais Lira XAG - Volafotsy Troy XAU - Troy grama ny volamena / elektronika volamena) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - Zimbaboe dolara ATS - Aotrisiana shilling AON - Angole vaovao Kwanza BEF - Belza Franc GRD - Grika drachma IEP - Irlandey kilao ESP - Zavatra peseta ITL - Italiana Lire CYP - Sipra kilao DEM - Deutsche marika NLG - Holandy guilder PTE - Portogey escudo SIT - Slovenianina tolar SRG - Suriname guilder FIM - Fin marika FRF - Frantsa Frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian Dinar vaovao
USD = 9.85 MGA
US dolara sarimihetsika mivantana
EUR = 10.40 MGA
Euro sarimihetsika mivantana
GBP = 12.08 MGA
Kilao Sterling sarimihetsika mivantana
JPY = 0.072845 MGA
Yen sarimihetsika mivantana
CNY = 1.47 MGA
Yuan sarimihetsika mivantana
Live forex tahan'ny fanakalozam-bola amin'ny 25 Jona 2022
Teti-bola ara-tantara, tantara ara-tantara.
Ny mpampindram-bola dia mampiseho ny taham-panakalozana ankehitriny amin'ny vola rehetra nofidina ho an'ny androany. Ny tahan'ny fifanakalozana dia apetraky ny banky nasionaly ary manao ny fototry ny famaritana ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny teboka fifanakalozana ary banky ara-barotra. Azonao atao ny manaraka ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny banky nasionaly mba hahitana ny fifanakalozana tsara indrindra amin'ny fividianana sy ny fivarotana vola.
Ny mpampindram-bola amin'ny tranokalanay dia mampiseho ihany koa ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny fifanakalozana Forex. Ny tahan'ny Forex dia manavao isaky ny 30 segondra. Jereo ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Internet maimaimpoana sy amin'izao fotoana izao.
Ny tahan'ny vola amin'ny fifanakalozana Forex dia apetraka isan-tsegondra, mifanohitra amin'ny tahan'ny taham-pirenena napetraky ny banky nasionaly indray mandeha isan'andro.
Manara-maso hatrany ny tahan'ny 173 vola isika, na amin'ny fifanakalozana ara-barotra na taham-panjakana ofisialy. Azonao atao ny mijery maimaimpoana ny fifanakalozana fifanakalozana vola any amin'ny vola hafa.
Azonao atao ny manara-maso ny fifanakalozana fifanakalozana sandan'ny vola iray hafa amin'ny iray amin'ireo tontonana manokana. Ny tahan'ny fifanakalozana dia aseho amin'ny endrika tabilao sy isa, ny fiovan'ny tahan'ny dia aseho amin'ny sehatra mitokana ho isan-jato. Ny fiakarana sy ny fihenan'ny vidin'ny vola dia aseho amin'ny loko samihafa.
Ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana tsara indrindra
Ny taham-panakalozana tsara indrindra dia azo arahana amin'ny sarin'ny fiovàna haingana eo amin'ny fifanakalozana fifanakalozana eo amin'ireo takelaka tranokala na eo amin'ireo pejin'ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Internet amin'ny fifanakalozana Forex. Ny fomba iray ahafahana manara-maso ny tahan'ny tsara indrindra dia ny fitandremana tsy tapaka ny fiovana amin'ny vola voafidy, ary rehefa mampiseho ny sandan'ny vidiny kely indrindra ny tabilaon'ny vola dia izao no fotoana tsara indrindra hividianana, ary rehefa ny farany no farany amin'ny famarotana vola.
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny androany
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny anio dia ny fampahalalana fototra izay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona. Azonao atao ny mahita ny takelaka ofisialy Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny anio amin'ny vola sandoka eran'izao tontolo izao.
Manara-maso ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola rehetra izahay ary fantatsika ny tahan'ny tsy ho an'ny anio, fa ho an'ny andro rehetra nanomboka tamin'ny 1992.
Ankehitriny Malagasy ariary ny vidiny dia vokatry ny varotra nandritra ny omaly. Amin ny fianarana ny fiovàna ao amin ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana an-tserasera omaly, azonao atao ny maminavina ny tahan'ny fifanakalozana ofisialy anio.
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny rahampitso
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny rahona dia natsangan'ny banky nasionaly miorina amin'ny Malagasy ariary varotra amin'ny fifanakalozana Forex sy fifanakalozana hafa ankehitriny. Rahampitso Malagasy ariary no fototry ny fifanakalozana ny Malagasy ariary any amin'ny banky ao amin'ny .
Noho izany, amin'ny fanaraha-maso ny fiovan'ny Malagasy ariary mandritra ny andro amin'ny fifanakalozana amin'ny tranokalanay dia afaka maminavina ny tahan'ny Malagasy ariary ho an'ny rahampitso ary Malagasy ariary fifanakalozana teny ao amin'ny banky rahampitso .
Amboary ny Malagasy ariary tontonana fanaraha-maso ao amin'ny pejin'ny tranokalan'ny tranonkala mpampindram-bola. Zahao ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana an-tserasera, ary ho hitanao fa marina foana ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho rahampitso.
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary manoloana ny dolara ankehitriny
Malagasy ariary Ny sandam-bola ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny no tena Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny tsenan'izao tontolo izao. Ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary manoloana ny dolara izay mamaritra ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary amin'ireo vola hafa.
Azonao jerena ny ofisialy Malagasy ariary ny dolara ny tahan'ny fifanakalozana dolara napetraky ny bankin'ny governemanta anio ary Malagasy ariary ny sandam-bola amin'ny fifanakalozana Forex amin'ny fifanakalozana Forex amin'ny Internet .
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary hanoherana ny euro ankehitriny
Ny tahan'ny fifanakalozana Malagasy ariary hanoherana ny euro mandritra izao fotoana izao dia aseho amin'ny tranokala moneyratestoday.com amin'ny dikan-teny roa:
ofisialy Taham-panakalozana an'ny Malagasy ariary mankany euro napetraky ny bankin'ny governemanta anio sy
Taham-panakalozana an'ny Malagasy ariary ny euro amin'ny fifanakalozana Forex amin'ny Internet
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny euro satria iray amin'ny vola lehibe indrindra eto an-tany no mamaritra ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny vola hafa eran-tany. Track Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny androany ao amin'ny dashboard an-tserasera.
Currency converter Malagasy ariary an-tserasera
Currency converter Malagasy ariary an-tserasera eto amin'ny tranokalanay dia ahafahanao mahita ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny sandan'izao tontolo izao. Manara-maso isan'andro Malagasy ariary hatramin'ny 172 vola hafa eto amin'izao tontolo izao.
Raha hanova ny Malagasy ariary dia mahazo tombony amin'ny vola hafa any amin'ny banky, araho ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny widgets-tsika.
Currency converter dolara amin'ny Internet
Currency converter online dollar dia serivisy serivisy serivisy serivisy an-tserasera amin'ny sandam-bola rehetra eto amin'izao tontolo izao Malagasy ariary. Azonao atao ny manara-maso ny fiovan'ny dolara:
amin'ny Widget manokana natao tamin'ny moneyratestoday.com
ao amin'ny ny tahan'ny fifanakalozana dolara ofisialy serivisy
ao amin'ny pejy ny ny tahan'ny fiovam-po amin'ny dolara amin'ny fifanakalozana forex amin'ny Internet
Ny mpanova dolara dia miasa amin'ny vola 172 amin'izao tontolo izao. Nasehontsika ny fifanakalozana fifanakalozana dolara ho an'ny anio sy ny tantaran'ny fiovam-po isan'andro isan'andro amin'ny 30 taona lasa.
Euro vola mpanova amin'ny Internet
Currency converter Euro an-tserasera - serivisy serivisy Euro amin'ny vola eto an-tany. Ny mpamadika vola an-tserasera Euro dia ahitana ny Malagasy ariary ho euro converter.
Ny tahan'ny fifanakalozana Euro amin'ny tranokala Converter Converter dia azo jerena amin'ny Internet amin'ireny kalkulator ireny:
amin'ny Widget manokana ao amin'ny moneyratestoday.com
ao amin'ny pejy ofisialy tahan'ny fiovam-po Euro
ao amin'ny serivisy an-tserasera, ny ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny euro amin'ny fifanakalozana forex amin'ny Internet
Ny converter euro dia mampiseho ny taham-panakalozam-bola amin'ny vola 172 amin'ny tontolon'izao tontolo izao. Izahay dia manana ny tahan'ny fifanakalozana fiovam-po euro ankehitriny ary ny tantaran'ny fiovam-po isan'andro amin'ny euro mandritra ny 30 taona lasa.
Dolara Ny Malagasy ariary mpampindram-bola amin'ny Internet
Dolara Ny Malagasy ariary converter an-tserasera - Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana tolotra amin'ny fifanakalozana Forex.
Azonao jerena ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny taham-pifanakalozana isaky ny 30 segondra.
Malagasy ariary raha ny tahan'ny fifanakalozana dolara dia azo jerena ao amin'ny minitra farany, ary ao anatin'ny adiny iray, ao anatin'ny iray andro.
Ny tantaran'ny Malagasy ariary dia ny tahan'ny fifanakalozana dolara dia notehirizina tao amin'ny tranokalanay nanomboka tamin'ny taona 1992. Jereo ny kilasy Malagasy ariary / dolara ny tahan'ny fifanakalozana isan'andro .
Euro to Malagasy ariary mpampindram-bola amin'ny Internet
Euro to Malagasy ariary converter an-tserasera - pejy an'ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny fifanakalozana Forex.
Malagasy ariary momba ny euro dia havaozina in-2 ao anatin'ny 1 minitra.
Malagasy ariary ho an'ny fifanakalozana fifanakalozana euro dia azo jerena ao amin'ny minitra farany, ary ao anatin'ny adiny iray, ao anatin'ny iray andro.
Ny tantaran'ny Malagasy ariary ny euro sy ny euro mankany Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana dia efa tao amin'ny tranokala nanomboka tamin'ny taona 1992. Ny taham-panakalozana dia azon'ny besinimaro atolotra ho an'ny ankolafy isan'andro.
Mpanakalo fiovam-po Bitcoin amin'ny Internet, tahan'ny bitcoin ho an'ny anio
Tsy aseho ao amin'ny tranokalanay ny mpanova vola Bitcoin. Moneyratestoday.com ihany no manara-maso vola.
Saingy ny tahan'ny fifanakalozana Bitcoin amin'izao andro izao dia fampahalalana lehibe ho an'ny zone crypto.
Eto ianao dia afaka mahita ny Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny androany .
Cryptocurrency converter an-tserasera, tahan\_'ny cryptocurrency
cryptocurrency converter azo jerena ao amin'ny rohy eto ambany ihany koa.
Ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana mihoatra ny 2000 dia arahana an-tserasera amin'ny tranokalan'ny mpiara-miasa.
Izao dia miha-malaza ny crypto ary mety ho lasa fanoloana ny dolara, euro ary vola hafa.